Home News Abshir Bukhaari iyo xubno u badan Mucaarad oo Kismaayo ka degay
Wafdi uu hoggaaminayo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka ayaa maanta gaaray Kismaayo kuna biiray mas’uuliyiintii horey halkaasi u joogay.
Wafdigan ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah gudoomiyaha Guddiga Arrimaha Dibadda Golaha Shacabka Cabdulqaadir Cosoble, iyo tobaneeyo xildhibaanno ah oo uu ka mid yaahay xildhibaan Mahad Salaad.
Mahad Salaad ayaa inta uusan Muqdisho ka bixin sheegay inay ceyb tahay in madaxweynihii dalka uu ku maqan yahay beer laga furay Itoobiya, xilli aayaha dalka tashanayo.
“Iyadoo mas’uuliyiintii Soomaaliya heer federaal iyo heer dowlad goboleed maanta ay ku tashanaan Kismaayo in Madaxweynaheenii qaranka isku boojeeyo furitaanka beer lagu nasto ee dalka kale waa nasiib daro aad u wayn!” ayuu yiri Mahad Salaad.
“Sida ku cad qodobka 87aad ee dastuurka KMG Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka waa astaanta midnimada qaranka; Ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadi’da asaasiga ah ee Dastuurka. Maantana isagii ayaa lagu baryayaa waan ku ogolnahay ee kaalay dalka iyo dadka isku wad duqiyow! Madaxweynaha waxaan leenahay dalka iyo dadka u tur fadlan!” ayuu yiri Mahad Salaad.
Previous articleAl-Shabaab iyo Ciidamada Dowlada oo ku wada dagaalamay deegaan hoostaga Degmada jowhar
Next articleDFS oo caawa soo saartay amar lagu xadidayo safarka Kismaanyo (aqriso)
Wasiirka Ganacsiga oo Muqdisho lagusoo dhaweeyay